Chautari Daily » कोरोनाको भ्याक्सीन लगाउने पहिलो भाग्यमानी नेपाली को हुन ? हेर्नुहोस्
उहाँले भ्यासीन लगाउनुभएको बारे गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले पुष्टी गर्नुभएको छ । भ्याक्सीन लगाएपछि डाक्टर श्रेष्ठको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बताइएको छ । काेराेना भाइरस बिरुद्धको औषधि निर्माण गर्न चीन, अमेरिका, भारत र बेलायत जस्ता सम्पन्न मुलुकहरू लागि परिरहेका छन् ।
प्रकाशित मिति ४ आश्विन २०७७, आईतवार ०३:२९